Shinoa Mens mihazakazaka Fitness Fitness akanjo lava Sleeve gym Fanombohana haingana fananganana maina sy mpanamboatra | Ruisheng
Ireo mihazakazaka Fitness akanjo akanjo lava lava Sleeve Sports dia mila maina haingana
Ny akanjo mihazakazaka Mens novokarintsika dia afaka mitondra traikefa ara-panatanjahan-tena tsara kokoa. Manana fitaovana famokarana matihanina izahay hiantohana ny kalitaon'ny akanjo. Raha te hampifanaraka ny fomba fitafy, logo, sns, ianao dia afaka mifandray aminay mivantana ary hanomezanay vidiny tiana kokoa izahay
Material: Mety / namboarina
Size: Misy habe azo atao
Color: fampisehoana sary na namboarina.
Anarana marika OEM
Laharana modely lambam-pandriana
Famantarana Ekeo ny Logo an'ny mpanjifa OEM
Size Misy habe azo atao
Colors Valiny takiana
Material Polyester / Cotton \_ Customization, takiana fitaovana
Vidiny ambany Betsaka ny azo ampidinina
1.Ny fangatahana sy fanontaniana rehetra dia hovaliana ao anatin'ny 24 ora.
2. haavon'ny maha-ao anatiny ao anatin'izany ny fenitra packing no tsara sy azo antoka indrindra.
3. Ny akanjo vokarintsika dia afaka hatsembohana haingana, fofonaina ary mahazo aina
4. Ekeo ny habe mahazatra, marika manokana, logo ary fonosana manokana!
ITamin'ny volana jona 2018, nahavita ny fanamarinana BSCI fenitra iraisam-pirenena ny orinasa. Manana orinasa 2 manokana izahay ao Huai'an, iray no antsoina hoe RuZhen manampahaizana manokana ao amin'ny T-Shit, Polo, Pants, Shorts, Sportwear, Jaket, Coat, iray hafa antsoina hoe Haolv matihanina amin'ny Bedding Set, Quilt, Pillow, Mattress, Decoration.
Ireo mpiara-miasa aminay dia mandrakotra marika 400 any amin'ny firenena 30 manerana an'izao tontolo izao hahazoana ny fahatokisan'ny mpanjifa rehetra manana kalitao avo lenta ary manana
nahazo fiderana avo be avy amin'ny mpanjifa hatramin'ny niorenany. Ny orinasa dia mitazona ny hevitry ny fitantanana fa "Ny toetra manaporofo ny tanjaka, ny antsipiriany dia mahatratra ny fahombiazana", ary miezaka tsara ny manao tsara amin'ny lafiny rehetra isaky ny zaitra, ny teboka tsirairay amin'ny fomba famokarana ka hatramin'ny fizahana farany, famonosana ary fandefasana. Izahay dia manizingizina ny fitsipiky ny fampandrosoana ny "kalitao avo lenta, Fahombiazana, Eincerity ary ary Down amin'ny tany fomba fiasa" hanome anao asa fanompoana tsara indrindra amin'ny fanodinana! Manasa anao indrindra izahay hitsidika ny orinasa anay na hifandraisa anay amin'ny fiaraha-miasa!
Previous: Akanjo polo lehilahy lobaka polo Akanjo fanamiana Polo Embroidery School Badge Polo T-Shirt
Manaraka: Fitaovana mavesatra vita amin'ny akanjo mafana Pajamas mafana amin'ny akanjo mafana any New 100% Cotton mampientam-po amin'ny lehilahy matory
mens Yoga Clothes Tummy control High waisted Wo ...
Ny palitao ririnina avo lenta amin'ny ririnina ...
Soavaly Ski palitao matihanina avo lenta no tiana ...
Fantaro ny tsara indrindra palitao Mens Cotton amin'ny Best S ...
Lehilahy ambony kalitaon'ny landihazo vita amin'ny landihazo ...